मनोरन्जन Archives - All Nepal
२०७४ सालका तपाई हामीले हेर्नै पर्ने सफल नेपाली फिल्महरु : जानकारी लिनुहोस कुन कुन फिल्म सफल रहे त ?
वि.स. २०७४ सालमा नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा थुप्रै चलचित्र भने । त्यसमध्ये केहि चलचित्रले राम्रो व्यापार गरे । त्यसमध्ये केहि प्रतिनिधि चलचित्रको बारेमा यहाँ जानकारी दिंदै छौ । छक्कापञ्जा–२ यो चलचित्र छक्कापञ्जाको सिक्वेल हो । ०७४ असोज ११ गते प्रदर्शनमा आएको चलचित्र छक्कापन्जा–२ ले आफूलाई यो वर्षकै सबैभन्दा बढी कमाइ गर्ने चलचित्रमा दर्ता गरायो । यो […]
हेर्नुहोस यसरी आयो फेसबुकमा लिलिबिली, प्रदर्शन भएको १ हप्तामै पाइरेसीको मारमा लिलिबिली
काठमाडौं, वैशाख ५ – मिलन चाम्सको निर्देशन रहेको सिनेमा ‘लिलिबिली’ पाइरेसीको मारमा परेको छ । सिनेमा हलबाट मोबाइलमा खिचेर सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सिनेमा अपलोड गरिएको निर्देशक चाम्सले जानकारी दिएका छन् । सुरुमा ५ र १० मिनेटका छोटा–छोटा सिनेमाका अंशहरु अपलोड गरिएको भएता पनि पछि पूरै सिनेमा अपलोड गरिएको थियो । सिनेमा सामाजिक सञ्जालमा आएपछि तत्काल […]